Maminitsi makumi mashanu Ekunyengeterera Vanopesana neVanopedza Kuuraya | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 50 Minamato YeMinamato Kupesana neKuparadza Kuuraya
Zvinhu hazvisi kufamba muhupenyu hwako here? , iwe unonzwa satanic gang kumusoro kurwisa destiny yako, hupenyu hwako hwakazara nekushungurudzika, kushushikana, kukundikana uye kuzvidemba here? Zvitarise, mhando dzekuponda dziri pabasa. Ini ndanyora makumi mashanu emunamato mapikisheni mafambiro evaurayi. Aya ndiwo madhimoni mumiriri anotumirwa naDhiabhasi kuti amise kufambira mberi kwako. Iwe unofanirwa kusimuka muminamato uye unamate nzira yako kubva kune yega rima radhiyadhi raakakuisa mauri.
Vanoponda ma Destiny varipo pese pese, vanoshandiswa nasatani kukukonesa kuzadzisa kuda kwako muhupenyu. Iwe unofanirwa kusimuka uye unamate, aya manamato ekumanikidza ekuuraya mhondi anokupa simba rekutora iyo hondo kuenda kumusasa wevavengi. Sezvo iwe uchinamata nhasi, Mwari achafumura avo vanozoponda vanouraya hupenyu hwako uye vanyadzise pachena muzita raJesu. Ndichakuona kumusoro.
1. Ini ndinoparadza kubata kwemunhu wese anouraya muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
2. Zvese ndinozvisunungura kubva kuna wese masatani anondibata ndakasungwa, muzita raJesu.
3. Baba neropa raJesu, ndinoparadza masatanist ese akamira munzira yangu yekuenda kuZita raJesu.
4. Baba, ndinoparidza murume kana mukadzi wese akashata anotarisa nezveremumoyo yangu kuti ndioremerwa muzita raJesu.
5. Nemoto wegonye dzvene, ndinoparadza chero munhu anomiririra akaipa muhupenyu hwangu muzita raJesu.
6. Ishe, rega mweya mutsvene uve nhungamiro yangu murwendo rwangu rwekuenda chaiko! Izjng destiny
7. Ini ndinoparidzira kudzoreredzwa kanomwe pane zvese zvandakarasikirwa nazvo kuendesa mhondi muzita raJesu.
8. Ini ndinoraira simba rese, ndichirwisa kuti ramangwana rangu riparadzwe, muzita raJesu.
9. Aiwa Mwari wekutsiva, simuka munditsiure kune vangu vakafira mhondi munaJesu zita.
10. Baba simuka murwire vese vanondivenga ndisina chikonzero muzita raJesu.
11.O Mwari, nditambanudzire uye ndivandudze simba rangu, muzita raJesu.
12.Mweya Mutsvene, vhura maziso angu kuti uone kupfuura zvinoonekwa uye ita zvisingaoneki zvive zvechokwadi kwandiri, muzita raJesu.
13.Haiwa Jehovha, ratidzirai mugumo wangu nomoto wako.
14.Dzidziso yangu ngaigamuchire simba raMwari pakurwisa chero zvakasvibiswa, muzita raJesu.
15.Mweya Wakachena, vhura maziso angu uye undipe kutungamira kwemaitiro ekuzadzisa zvandinoda kuita, muzita raJesu.
16.OIshe, sunungurai mweya wangu kuti utevere kutungamira kweMweya Mutsvene muzita raJesu
17. Ini ndinogamuchira dziviriro yekudenga murwendo rwangu kuti ndigadzirise magumo angu, muzita raJesu.
18.Ndinoreurura kuti hupenyu hwangu uye zvinotarisirwa zvichave zvinoshanda muhupenyu hwangu hwese, muzita raJesu.
19.Mweya Mutsvene, ndidzidzise kunyengetera kuburikidza nematambudziko pane kuti ndinamate nezvavo, muzita raJesu.
20.O Ishe, ndinunure kubva pamiitiro yose yakaipa inokanganisa mafambiro angu muzita raJesu.
21.Kese kushata kwemweya wakashata neketani kunotadzisa kufambira mberi kwangu muhupenyu uye mafambiro anotyorwa zvidimbu nemunwe waMwari muzita raJesu.
22. Ini ndinotsiura mweya yega yega yekusuwa pamweya uye upofu muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
23.OIshe, ndinunurei mukupomedzerwa mhosva dzevapambi venhema muzita raJesu.
24.OIshe, ndipeiwo simba kuti ndidzivise satan kuti azonditiza nekusingaperi muzita raJesu
Ini ndinosunga murume akasimba kuseri kweupofu hwangu pamweya uye nehumatsi uye ndinokanganisa mashandiro ake muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
26.Ndinozvifukidza kuti ndinodzivirirwa namwari neropa raJesu.
27.Ini ndinosarudza kutenda chirevo chaIshe uye kwete chimwe, nezvekuda kwangu muzita raJesu.
28.Rega moto weMweya Mutsvene unyungududzire kuramba kwangu, muzita raJesu.
29.O Ishe, dzorerai makore angu akaraswa muzita raJesu.
30.Rumbidzai, Ndipei pamweya wekuteterera kuti nditsiga pamoyo wangu wekunamata muzita raJesu
31.Regai moto weMweya Mutsvene uputse murume wese kana mukadzi anozviita mwari pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
32.O Ishe, ndizodze kuti ndinamate ndisingaregi.
33. Ini ndinotumira moto waMwari kuti uparadze satanic yese yakachengetwa muhupenyu hwangu uye destiny muzita raJesu
34. O Ishe, vhura maziso angu emweya kuti uone vavengi vandikomberedza vanozvishongedza seshamwari dzangu muzita raJesu.
35. Muzita raJesu, ini ndinotora simba rese kuseri kwekunze kwangu kwemweya uye kusaziva muhupenyu hwangu muzita raJesu
36. Ah Ishe, ndipe simba pamweya kuti ndimhanye nhangemutange yedzidziso yangu yezita raJesu
37.Mweya Mutsvene, inaya pamusoro pangu ikozvino, muzita raJesu.
38.Mweya Mutsvene, vhura zvakavanzika zvangu zvakasviba, muzita raJesu.
39. Iwe mweya wekuvhiringidzika, sunungura kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu
40. Mune simba reMweya Mutsvene, ndinoshora simba rasatani pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
41.Mweya Mutsvene, durura Simba rako rekuporesa pandiri, muzita raJesu.
42.Tora mvura yehupenyu iburise munhu wese asingadiwe muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
43.Imi vavengi venyama yangu, varemadzwa, muzita raJesu.
44.O Ishe, tanga kunatsa kubva pane hupenyu hwangu zvese izvo zvisiratidze Iwe.
45.Ishe Jesu, ndipfekedzei pamuchinjiko Wenyu.
46. ​​Ini ndinoramba kusvibiswa kwemweya kwega kwega, muzita raJesu.
47.Rumbidzai Jesu, nditsemukei, ndisungurei, ndiumbe, mundizadze uye mundishandise nesimba remweya Wenyu.
48.O Ishe, ndinozvirasikirwa mamuri.
49.Mweya Mutsvene, ndinobatidza kubwinya kwaMwari, muzita raJesu.
50.O Ishe, rega kuzodzwa kweMweya Mutsvene kuputsa joko rega rekudzoka muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
Ndatenda Jesu nekundisunungura muzita raJesu.
Previous nyayaKununurwa Munamato pamweya wehupombwe
inoteveraKununurwa Munamato Kumiririra Kubata muVini
Eliane Kubvumbi 10, 2021 At 2:39 pm
Bonjour Pasteur, je voulais juste vous demander pour quoi vous avez pas mettes toutes les prières dans un livre.
Mapisarema 9 Iwo Mharidzo Ndima Ndima